Dad loo qabtay dilka Wasiir ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Dad loo qabtay dilka Wasiir ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle
Ciidamada ammaanka DG Hir-Shabeelle ayaa Magaalada Jowhar ka sameeyay howlgalo ay ku raadinayaan shaqsiyaadkii ka dambeeyay dil loo geystay AUN Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame oo sidoo kale ahaa Wasiiru-dowlihii Arrimaha diinta & Awqaafta.
Hay’adaha ammaanka ayaa baaristooda kusoo qabtay shaqsiyaad aan la shaacin tiradooda, balse la geeyay qaarkood xarumaha dambi baarista si dadka lagu waayay ku lug lahaanta dilka loosii daayo.
Ciidamada Booliiska ayaa intooda badan la dhigay waddooyinka Xaafadaha, waxaana la joojiyay isu socodka dadka iyo Gaadiidka inta uu socday howlgalka qorsheysan, inkasta oo saakay dib loo furay waddooyinka.
Waa dilkii labaad Magaalada Jowhar loogu geysto Xildhibaan katirsan Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle, waxaana Marxuum Nuur Xaashi ka horeeyay Xildhibaan Cabdulqaadir Abuukar muxumed Karaani oo u magacawnaa Wasiirka Beelaha maamulkaas, inkasta oo uusan xilka la wareegin.
Previous articleAl-Shabaab oo war layaab leh kasoo saaray dilka Wasiir ka tirsanaa Hir-Shabeelle
Next articleAxmed Madoobe oo cadeeyay mowqifkiisa Ra’iisul Wasaaraha la Magacaabay